Buy Mini condo အဌား (700,000Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
Mini condo အဌား
ရောင်းချသူ: မင်း အာရုံ
(mini condo)ဌားရန် ရှိပါသည်*
*အကျယ်ဝန်း>>>၂၅ပေ. ၅၀ပေ. ၇လွှာ*
*ဖွဲ့စည်းပုံ>>>1,Master bedroom. 1,bedroom. 2,Aircons. ပါကေး. Lift*
*ဈေးနှုန်း>>> ၇ သိန်း*
*လူကြီးမင်းတို့၏ အိမ်ခြံမြေများ ရောင်း ဌား ဝယ်လိုပါကဖုန်းလေးတချက်သာ ဆက်ပေးပါ လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည် ခင်ဗျာ*
Condo For Rent ( In Dagon Townsh...
Are you looking for rent nice ho...
Apartment For Rent In #Dagon Tow...
အမည်: Mini condo အဌား